Tsvangirai meets Zambian president as he faces possible arrest in Zimbabwe - Zambian Watchdog
Zimbabwean Prime Minister Morgan Tsvangirai who is facing a possible arrest home met Zambian president Rupiah Banda Tuesday afternoon.
Prime Minister Tsvangirai and his MDC delegation is on a SADC tour to seek regional support against president Robert Mugabe.
Tsvangirai’s regional tour comes in the wake of increased arrests of his ministers and Members of Parliament in recent weeks, according to Radio VOP Zimbabwe.
But now Zimbabwe’s Attorney General Johannes Tomana wants Tsvangirai arrested for contempt of court.
Tsvangirai is accused of condemning a Supreme Court ruling which set aside the election of former Zimbabwe Speaker of the House of Assembly Lovemore Moyo.
RB, KK expected in Chona to mourn Munkombwe’s wife
« President Banda continues threatening PVT advocates
Waza Kaunda says rigging, not tabulating polls is criminal »